July 22 Gaza Crisis ~ Thu Tatuam (Siyin News)
July 22 Gaza Crisis
12:35 AM Israel Taw Kisai No comments
11:45 p.m. Hamas စစ်ဖက် ဗိုလ်မူးKhan Younis ၏ နေအိမ်အား Israel ပစ်ခတ်သဖြင့် Khan Younis နင့်အတူ အခြား နှစ်ဦးသေ ပါလက်စတိုင်းဖက်မှ သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၆၃၃ရှိကြောင်း Maam သတင်းတွင်ဖော်ပြ
11:35 p.m. ဝန်ကြီးချုပ် Binyamin Netanyahu က US Secretary John Kerry အား လေကြောင်းလိုင်းပြန်လည်ပြန်လည်ပတ်စေလိုကြောင်းပြော/ တောင်းဆို
11:20 p.m. ဂရိမူဆလင်များ အေသင်မြို့ Israel
11:20 p.m. အာရပ်များက ရဲကားအား မိးလောင်ဗုံးပစ် ရဲကားပျက်ဆီး
11:00 p.m. Beduin ရှိ Israel နေအိမ်များသို့ ဟားမာစ်တို့ပစ်ခတ်သော ဒုံးများ ကျ သေဆုံးသူမရှိ
10:00 p.m. Palestinian သမတ Mahmoud Abbas က မိမိတို့ နှင့် ဟားမာစ် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကို ဖျက်ဆီးရန် Israel ကြိုးပမ်းဟု ပြော
9:06 p.m. Shfela ဒေသအားပစ်ခတ်သော ဒုံးနှစ်စင်းအား Israel ပစ်ချ
8:58 p.m. Rishon Lezion, Bat Yam, Modi'in, ဟားမာစ် ဒုံးကျည်တွေကို Shfela ဒေသမှာ Israel ကထပ်မံပစ်ချ
8:23 p.m. Ashdod နဲ့ Yavne ကို ပစ်လိုက်တဲ့ ဟားမာစ် ဒုံးကျည်တွေကို Shfela ဒေသမှာ Israel ကပစ်ချ
8:16 p.m. အီးယူ အနေနဲ့ ဟားမာစ်ကို လက်နက်ချဖို့ တိုက်တွန်း
8:14 p.m. Ben Gurion လေဆိပ် ကို ဟားမာစ် ပစ်ထားတော့ အမေရိကန်လေယာဉ်တွေ ဆက်လက် မပျံဖို့ FAA တားဆီး
6:59 p.m. Gaza အနီး Israel ဖက်ခြမ်းတွင် အရေးပေါ် သတိပေး ဥသြဆွဲ
6:04 p.m. Israel သို့ ရောက်သော မြေအောက်ခေါင်း တစ်ခု အား Kibbutz Ein Hashlosha အနီးတွင် လေထီးတပ်ဖွဲ့မှ တွေ့ရှိ၊ ၂၀၁၃ တွင်တွေ့ရှိခဲ့သော နေရာ အနီးဖြစ်
6:00 p.m. Ma'an သတင်းအရ Palestinian သမတ Mahmoud Abbas ၏ Saudi Arabia ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းကာ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူအား ယနေ့ည ၁၀ (မြန်မာစံတော်ချိန် ဇူလိုင် ၂၃ နံနက် ၁း၃၀) တွင် မိန်ခွန်း ပြောမည်
5:48 p.m. Beersheba တွင်အရေးပေါ်သတိပေး ဥသြသံများကြားရ
4:50 p.m. "Hamas ဆိုတာ ISIS, Hamas ဆိုတာ al-Qaida, Hamas ဆိုတာ Hezbollah, Hamas ဆိုတာ Boko Haram," ဟု Netanyahu က ကုလအတွင်းရေးမူး နှင့် သတင်းစာရှင်းပွဲတွင်ပြော
4:35 p.m. ကုလ အတွင်းရေးမူးချုပ်ဘန်ကီမွန်း ဂျီဟတ်များ ကျနော် စကားပြောနေတုန်းကို လောင်ချာနဲ့ Israel ကို ပစ်နေပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် မဟုတ်တာတွေ မမှန်တာတွေ ဗိဒီယိုကလစ်တွေလဲ ကြည့် ခဲ့ရပါတယ်
စာသင်ကျောင်း နဲ့ ဆေးရုံ တွေ နဲ့ အရပ်ဖက် သေဆုံးမူတွေကို ရူတ်ချပါတယ်၊
ပြန်ပြေးဆွဲခံပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သုံးယောက် နဲ့ မီးရိူ့ခံရတဲ့ ပါလက်စတိုင်းကောင်လေး တစ်ယောက်ကိစ က မေ့လို့မရပါဘူး
Israel ကို တိုက်တွန်းချင်တာ က တိုက်နေတာတွေရပ်ပါ၊ နောက်ခြောက်လဆို အခြေအနေ မတူတော့ပါဘူး ခိုင်လုံတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိယင် ကျနော်တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ပါ့မယ် ဟု သတင်စာရှင်းလင်ပွဲ အဆုံးသတ်
4:30 p.m. UN Secretary-General Ban Ki-Moon နှင့် Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu တို့ Tel Aviv တွင်တွေ့ဆုံ
Binyamin Netanyahu က ဘန်ကီမွန်းအား "ဘယ်နိုင်ငံက မှ သူ့နိုင်ထဲကို မြေအောက်လိုင်ခေါင်းတွေနဲ့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာလက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပါလက်စတိုင်း က အီဂျစ် ရဲ့ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးတာ တောင်လက်မခံပါဘူး
ကျနော်တို့ပစ်မှတ်က ဟားမာစ်ပါ၊ သူတို့က ဗလီ ၊ စာသင်ကျောင်း ဆေးရုံတွေမှာ ခြေကုပ် ယူပါတယ် သူတို့လိုချင်တာက ဂါဇာပြည်သူတွေကို မသေ သေအောင် စိစဉ်ထားပါတယ်၊ မြေအောက်လိုင်ခေါင်းတွေတူးပြီး Israel ကို ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။
4:12 p.m.Israel ဖက်မှ လေထီးစစ်သည် St.-Sgt. Evyatar Turgeman, နှစ်အား ဟားမာစ်မှ သတ်ဖြတ်
3:59 p.m. Beersheba ဒေသတွင် အရေးပေါ်ဥသြဆွဲ
3:39 p.m. ဂါဇာနယ်စပ်တစ်လျှောက် အရေးပေါ် ဥသြဆွဲ
3:15 p.m. ဖမ်းဆီးခံ Israel စစ်သားနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အား ကာတာ နိုင်ငံရှိ ဟားမာစ် စင်တာမှ ပြောကြား
2:40 p.m. ယနေ့ Gaza မှပစ်လိုက်သော ရောက်ကဒ် ၂၅ လုံးအနက် ၁၄ လုံးအား Israel မှဖျက်ဆီး နိုင် ၁လုံးမှာ Gaza ၌ပင် ဖျက်ဆီး
2:26 p.m. ဟားမာစ် ပစ်မှတ် ၁၉၀ အား အင်္ဂါနေ့ တွင် တိုက်
2:24 p.m. ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Israel စစ်သား Sgt. Oron Shaul အသက်ရှင်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရ
Gaza 12:18 p.m. Israel ဝန်ကြီးချုပ် Binyamin Netanyahu နဲ့ ကုလသမဂ အထွေထွေအတွင်းမူးချုပ် Ban Ki-moon တို့ဟာ ဂါဇာ နဲ့ ပတ်သက်ပြိ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်း ၄း၀၀ မှာ တွေ့ပါမယ်
11:10 a.m Israel ဖက်က ကျဆုံးသွားတဲ့ ၁၃ ယောက်ထဲက NCO Ohad Shemesh ၂၇ နှစ်ရဲ့ ဇာပန အခမ်းကို အင်္ဂါနေ့ နေလည် ၃း၃၀ အချိန်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ပါမယ်
11:07 a.m Ashkelon, Ahsdod အားတိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်း သတိပေး
10:13 a.m. Tel Aviv မြို့ Yahud ဒေသ ပစ်ခတ်မူကြောင့် တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ တစ်ဦးထိတ်လန့် သတိမေ့
10:13 a.m. Tel Aviv မြို့ Yahud ဒေသ အား ဟားမားများ ပစ်ခတ်သော ဒုံးအား Israel ဖက်မှ ဖျဆီး ပစ်ချနိုင်
10:00 a.m. Tel Aviv အား ဟားမာစ်များ ဒုံးဖြင့် ပစ်ခတ် ၊ ပစ်ခတ်သော ဒုံးများအားလုံး Israel မဖျက်ဆီးနိုင်
9:33 a.m. Eshkol ဒေသသို့ Gaza မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော ဒုံးကြောင့် အချက်ပေးဥသြဆက်တိုက်မြည်
9:33 a.m. Ashkelon, အားပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း Israel မှ သတင်းရသဖြင့် အရေးပေါ် ဥသြဆွဲ.
9:30 a.m. ဟားမာစ်က Ashdod မြို့ကို ပစ်လိုက်တဲ့ ဒုံး ၇လုံး ကို Israel Iron Dome က အောင်မြင်စွာ ပစ်ခတ် ဖျက်ဆီး
9:24 a.m. Palestinian ဖက်မှ သေဆုံးသူ ၅၃၉ ဦး ဟု တရားဝင်ထုတ်ဖော်
9:11 a.m. Ashdod, Ashkelon, အားပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်း Israel မှ သတင်းရသဖြင့် အရေးပေါ် ဥသြဆွဲ.
9:00 a.m. ဟားမာစ်များ ပစ်ခတ်သည် ဒုံးစင်း ရေတွက် ၂၀၄၀ ခု ရှီပြီး ၃၉၆ သာ Israel ဖက်မှ ဖျက်ဆီးနိုင်ကာ ၁၅၇၀ လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲ Israel အနေဖြင့် ပစ်မှတ် ၂၉၂၄ အား ပစ်ခတ်ခဲ